Aqalka sare oo soo saaray qodobbada dhaliyay is mari waaga u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada - Halbeeg News
Aqalka sare oo soo saaray qodobbada dhaliyay is mari waaga u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
MUQDISHO (HALBEEG)- Guddigii golaha aqalka sare loo xil saaray dhex dhexaadinta khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho kasoo saaray go’aanno cusub.
Xubnaha guddigan oo maanta shir jaraaid ku qabtay maagalada Muqdsiho ayay ku faahfaahiyeen halka ay mareyso howsha xal u helidda khilaafka u dhexeeya maaamullada dalka iyo dowladda federaalka.
Guddoomiyaha guddiga Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa saxaafadda horteeda ka akhriyay warbixin muddo bilooyin ah uu guddiga aqalka sare kasoo uruurinayay labada dhinac ee uu khilaafku u dhexeeyo .
Go’aanka ay soo saareen guddiga aqalka sare ee ku howlanaa xallinta khilaafka ayaa lagu soo uruuriyay qodobbo dhowr ah oo saldhig u ah khilaafka iyo mugdiga siyaasadeed ee muddoyinkii u dambeeyay hareeyay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah.
“waxaan maanta shaacinaynaa in khilaafkii jiray go’aan laga gaaray, loona howl galayo sidii loo dhamayn lahaa inta harsan, aqalka sarena uusan ka hareynin illaa uu ka dhameystiro, go’aankiina aannu fileyno in sida uu yahay loogu wada qanco loona qaato” ayuu yiri Senator Faroole.
Guddiga ayaa sheegay in tabashooyinka ay soo gudbiyeen dowlad goboleedyada ay yihiin kuwa ay ka mideysanyihiin iyo kuwo ay si gooni gooni ah u qabaan.
Nuxurka tabashooyinka ay ka mideysanyihiin maamul goboleedyada ayaa lagu soo xooriyay illaa iyo siddeed qodob oo kala ah
1-dedejinta dhamaystirka Dastuurka federaalka
2-ka howl galidda dhismaha ciidanka qaranka iyo sugidda amniga
3-dhisidda guddiga garsoorka qaranka iyo dib u habeynta garsoorka
4-ka howl galidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka
5-ka heshiisiinta qaabka doorashada guud ee 2021-ka iyo dhismaha axsaabta siyaasadeed.
6-xoojinta nidaamka federaaleynta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan
7-mideynta qorshaha qaranka sida wax wada qeybsiga mashaariicda iyo dhaqaalaha iyadoo dowladda dhexe ay yeelaneyso go’aaminta meelaha ku habboon ka hir gelinta kaabayaasha dhaqaale iyo bulsho ee heer qaran.
8-fara gelin la’aanta doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa dowladda dhexe.
Guddiga ayaa xukuumadda Soomaaliya ugu baaqay in si dhaqso ah uga howlgasho xallinta khilaafka iyada oo laga duulayo qodobbada uu soo saaray guddiga aqalka sare.
Khilaafka u dheexeya dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa soo jiitamayay waayadii dambe iyada oo madaxda maamul goboleedyada ay dhow jeer ka biya diideen casuumado uu madaxweynaha dalka u fidiyay si loo xalliyo is marin waaga taagan.
Wafdi ka socda Midowga Afrika oo la kulmay madaxda Koonfur Galbeed
Maamulka Sh. Hoose oo amray in la joojiyo bixinta dhulalka danta guud